लाभको स्वार्थमा शिक्षामन्त्रीले सम्झौता तोडे : डा. केसी
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले लाभको स्वार्थमा आफुसँग भएको सम्झौता तोडेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले संसदको वर्षे अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरि आफुसँगको सम्झौता तोडेको आरोप लगाए । डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायत आफूसँग भएका सबै सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए पुनः सत्याग्रह थाल्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको साटो शिक्षा मन्त्री पोखरेलको ‘अपारदर्शी क्रियाकलाप’का कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले थाह्रै नदिइ सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिए ।
विधेयकलाई पारित हुन नदिने मन्त्री पोखरेल सो पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने बताउँदै केसीले बिज्ञप्ति मार्फत उनको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलको विधेयकमा निहित स्वार्थ रहेको समेत डा. केसीको आरोप छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा स्वार्थ राखेर सम्झौताका केही बुँदा हटाए मात्र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएकाले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा पहिले पनि माथेमा प्रतिवेदन विपरीतका प्रावधानहरू कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा उनको भूमिका थियो ।’
डाक्टर केसीले हाल सयौं संख्यामा सिटिइभिटी, नर्सिङलगायत कलेजहरू कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकतिको पर्खाइमा रहेको र त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको आरोप लगाएका छन् ।